Umbhalo wesandla we-voynich, incwadi enqabileyo enemifanekiso emhlabeni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umbhalo obhaliweyo we-voynich, incwadi yemifanekiso enqabileyo emhlabeni ibhalwe ngu umbhali ongaziwayo nolwimi, ngokungathi sisiqendu see-X-Files lo mbhalo wesandla okoko wafunyanwa ishiye bonke ababhali-mbali bengathethi ngubani owayijongayo ngomnqweno wokuyiqonda, ifihla ntoni imizobo yabo? Ngaba yincwadi yeentsomi yebhotani? Ngubani umdali wayo? amathandabuzo kunye namanye amathandabuzo ayawuvala lo mbhalo-ngqangi, uwenze ube ngumceli mngeni.
Incwadi egcwele imizekeliso yezinto ezingeyonyani: izilwanyana kunye nezityalo encwadini ebonakala ngathi ifana nentsimi yencwadi yezityalo, mhlawumbi Incwadi ebuntsomirha yomculi othile onomdla kodwa kutheni? Lufihla ntoni ulwimi lwakho? kuyacaca ukuba lulwimi olusengqiqweni kodwa olungenakufikelelwa.
Umbhalo wesandla we-voynich, incwadi enqabileyo enemifanekiso ehlabathini ibonakala njengencwadi yezityalo Kuba isibonisa ngokweenkcukacha iindawo ezahlukileyo zezityalo, uninzi lwezi zityalo luye lwafana nenyani kodwa azikho kwihlabathi lethu. Incwadi ikholelwa ukuba iyasixelela ukuba sizisebenzisa njani zityalo kunye nokubafumana phi
Njengoko sinakho kumfanekiso ongentla yincwadi ene-cizidalwa ezingezizo ezokwenyani kodwa ngononophelo olubukhali ngokungathi yincwadi yentsimi Bathetha ntoni oonobumba abangasentla? Ukuba sijonga ngokusondeleyo, sibona isicatshulwa esisezantsi ngokungathi yinkcazo okanye ulwazi olongezelelweyo malunga nesilwanyana. Isilwanyana luhlobo lwehashe nesiqingatha somzimba wombungu onamavili, intle kodwa iyimfihlakalo ngaxeshanye.
Sinokubona ezinye imizekeliso yezinye izinto ezingeyonyani ngaphakathi kweso sandla, asinakukhanyela ukuba sumgangatho wegraphic ulunge kakhuluNokuba yeyokwenene okanye akunjalo, ngumsebenzi ongenakuthelekiswa nanto. Imizekeliso yakhe engekho ngqiqweni kunye nobuchule obusetyenzisiweyo bufana nefilimu. Kronike ISpiderwick Apho sinokubona khona incwadi enemifanekiso enezinto ezinomlingo kunye nokuthinta okuthile kwincwadi ebhaliweyo voynich.
Ewe sinjalo Ababonisi abanomdla ekudalweni kwabalinganiswa le ncwadi inganceda ukusikhuthaza, eyona nto intle yintlantsi yoyilo kukubona inkuthazo ebonakalayo esisa kulo lonke ilizwe lomlingo nelingeyonyani.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nesicatshulwa ungayibona le nto Uxwebhu oluncinci.
Ukutsala, ukutsala amehlo, uyilo kunye nothando Umsebenzi womyili wale ncwadi imangalisayo uyibonisayo nanamhlanje iseyinto yonken ifayile X yeyethu.
Ukuba ungathanda ukubona le ncwadi ungayikhuphela simahla koku web.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Umbhalo wesandla we-voynich, incwadi enqabileyo enemifanekiso ehlabathini
UArnold Bric sitsho
Zihlobo, imifanekiso ayiveli kwincwadi ebhaliweyo !!!!
Phendula uArnoldo Bric